Dual-mode 5G ဟာ Dual SIM 5G နဲ့မတူပါ - PX
5G ကိုပြောင်းခြင်းဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်ရလာပြီး ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှေ့ဆက်ထွက်ရှိလာမယ့် Flagship ဖုန်းတွေမှာ 5G Connectivity ထည့်လာဖို့ကတော့ အသေအချာပါပဲ။
Cellular connectivity ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ 5G ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းတွေ ၊ ကားတွေ နဲ့ IoT (Internet of Things) Devices တွေမှာ ပိုမိုစိတ်ချရတဲ့ ပိုမြန်ပြီး Internet ကိုယူဆောင်ပေးလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် 5G မလာ‌သေးခင် ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေကို သည်းခံရပါဦးမယ်။
သင်ဟာနည်းပညာကို နားလည်ရင် လေ့လာလိုက်စားသူဆိုရင် 5G NR ၊ NSA ၊ SA ၊ mmWave စတဲ့အသုံးအနှုန်း‌တွေကို သိလောက်မှာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း တွေ့နေရတဲ့ အသုံးတစ်ခုကတော့ Dual Mode 5G ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ရဲ့ 5G Chipset ပါ၀င်လာမယ့် Dual Mode 5G phone အကြောင်းကို Vivo ကပြောထားပါတယ်။ အဲ့အပြင် တစ်ခြားသော ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ OPPO နဲ့ Xioami တို့မှာလည်း Dual Mode 5G ဖုန်းတွေရှိလာမှာပါ။
Dual Mode 5G ဟာ Dual SIM 5G နဲ့ တူလား?
တကယ်ကမတူပါဘူး။ တစ်ချို့သောသူတွေအနေနဲ့ Dual Mode 5G ကို Dual SIM 5G (SIM ‌Card နှစ်ခုလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက် 5G ထောက်ပံ့ခြင်း) နဲ့ ရှုပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဲ့လိုရှုပ်ထွေးမှုဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ 4G LTE နဲ့ VoLTE လက်ခံခြင်းမှာ Single and Dual SIM ကွဲလွှဲမှုတွေကနေ အစပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအသုတ် 4G LTE ဖုန်းတွေမှာ 4G ထောက်ပံ့မှုကို SIM card တစ်ခုမှာသာရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ SIMs နှစ်ခုစလုံးမှာ 4G LTE ထောက်ပံ့လာတဲ့ ဖုန်းတွေရှိလာပါတယ်။ အဲ့ပုံစံအတိုင်း ဖုန်းတွေရဲ့ Slot နှစ်ခုစလုံးမှာ 4G ရပြီး VoLTE ကတော့ SIM တစ်ခုမှသာရပါတယ်။ အခု‌မှာတော့ Dual SIM Dual VoLTE ဖုန်းတွေရှိလာတဲ့အတွက် VoLTE ကို SIM Cards နှစ်ခုလုံးမှာ ချက်ချင်းဖွင့်လို့ရမှာပါ။
မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ် အရင်က SIM2Card ရတဲ့ဖုန်းတွေမှာ ၁ ကဒ်က 4G ရပြီး ကျန် ၁ ကဒ်က 2G ပဲရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတောင် Ooredoo တို့ Telenor တို့စ၀င်ခါစ အချိန်မှာ Ooredoo SIM Card တွေ 3G ရတဲ့ Handset တွေမှာပဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Dual SIM အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Ooredoo Card ကို 3G SIM Slot မှာထည့်ပြီး ကျန် ၁ ကဒ်ကို 2G SIM မှာ ထည့်ပြီး အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့သဘောနဲ့အတူတူပါပဲ။
Dual-mode 5G ကတော့ လုံး၀မတူညီတဲ့ သဘောတရားကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ Dual-mode 5G ဟာ NSA (Non-Standalone Access) နဲ့ SA (Standalone Access) စတဲ့ အခြေခံ 5G network အမျိုးအစားနှစ်ခုအတွက် 5G ထောက်ပံ့‌ပေးတာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
Dual-mode 5G ပိုအရေးပါတဲ့ အကြောင်းက အခုလက်ရှိ Snapdragon X50 Modem ပါတဲ့ဖုန်းတွေ (Galaxy Note 10+, LG V50 Thinq 5G, etc.) မှာ 5G NSA ကိုသာထောက်ပံ့ပေးထားလို့ပါ။ အဲ့အတွက် NSA သာမက SA ကိုပါထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်းက တစ်ပန်းသာတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
Dual Mode 5G ဆိုတာဘာလဲ?
5G NR (New Radio) ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ 5G standard လို့ပဲလက်ခံထားပါတယ်။ အပေါ်‌မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Mode in 5G NR ဟာ NSA နဲ့ SA အတွက် 5G ထောက်ပံ့တာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
Non-Standalone Access သို့ NSA က 5G အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရှိပြီးသား 4G LTE အခြေခံကို ပိုမြင့်တဲ့ Speeds နဲ့ Data bandwidth ရဖို့ ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါ‌ပေမယ့် Latency တိုးတက်မှုတွေမှာတော့ အသင့်အတင့်ပဲရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Network operators တွေအနေနဲ့ 5G ကို ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲ ‌ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းနိုင်မှာပါ။
Standalone Access သို့ SA က 5G ကတော့ အခြေခံကနေ ပြုလုပ်ဖို့လို့လိုအပ်ပါတယ်။ Standalone Access ဟာ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ Telecom Operators အနေနဲ့ 5G NR ရဲ့ အဓိကကျတဲ့လုပ်နိုင်မှုတွေကို အကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ရလာမှာပါ။ Standalone 5G ဟာ Low latency လိုအပ်တဲ့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ခြင်း နဲ့ မောင်းသူမဲ့ကားစတဲ့ အရေးပါသော 5G အသုံးပြုမှုတွေမှာ လွယ်ကူချောမွေ့စေပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် Standalone Access ဟာ စီပွားရေလုပ်ငန်းတွေကို ဖြည့်တင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NSA ထက်ပိုကောင်းတဲ့ နည်းပညာလို့လည်း ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
Dual-mode 5G ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအတွက် အရေးပါလား?
5G Standalone network ရှိတဲ့‌တစ်ခုတည်းသော Operator ဟာ South Korea က SK Telecom မှာပဲရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းမှာ Dual-mode အထောက်အပံ့ရှိခြင်းက နောင်လာမယ့် 5G Networks တွေမှာ 5G ထောက်ပံ့မှု အလုံအလောက်ရလာဖို့‌သေချာစေမှာပါ။ India နဲ့ တစ်ခြား ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ လက်တွေကျတဲ့ ရှုထောင့်အရ Dual-mode support ဟာ နှစ်အကြာကြီး ဖုန်းတစ်မျိုးကိုပဲသီးသန့်သုံးတဲ့သူတွေအတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး။အကြောင်းက NSA networks ဟာ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ ရွေးပိုင်ခွင့်မျိုးသာရရှိလာမှာဖြစ်လို့ပါ။
ဘယ် Chipsets တွေဟာ Dual Mode 5G ထောက်ပံ့ပေးလဲ ?
အခုလက်ရှိမှာတော့ Huawei’s Kirin 990 Duo နဲ့ Exynos 990 ၊ Exynos 980 လို Samsung Exynos 5100 chips တွေမှာ Dual Mode 5G ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဲ့ Chipset ပါတဲ့ဖုန်းတိုင်း Dual Mode အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဖုန်းပေါ်မူတည်လို့ ထောက်ပံပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Chipset တွေလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက 5G Edition မှသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Snapdragon 865 ကတော့ X55 modem ကိုရပ်တည်ပြီး 5G NSA နဲ့ 5G SA နှစ်ခုစလုံး ထောက်ပံ့ပေးလာမှာပါ။
Redmi K30 4G version ရဲ့ Specifications များထပ်မံပေါက်ကြားလာ